Muxuu ka yiri Valverde guushii soo laabashada ahayd ay kaga gaareen Rayo Vallecano kulankii xalay ee La Liga? – Gool FM
Muxuu ka yiri Valverde guushii soo laabashada ahayd ay kaga gaareen Rayo Vallecano kulankii xalay ee La Liga?
(Barcelona) 04 Nof 2018. Macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa wuxuu ka hadlay guushii soo laabashada ahayd ay kaga gaareen kooxda Rayo Vallecano kulankoodii 10-aad ee horyaalka La Liga.
kooxda Barcelona oo marti ku ahayd Rayo Vallecano Stadium ayaa lasoo laabatay guul 2-3 ah, xili goolasha ay ka heleen Luis Suarez oo 2 gool ah, iyo Ousmane Dembele.
“Waa inaan ku faraxnaa natiijada guushan, iyadoo la tixgelinayo wixii dhacay intii lagu jiray ciyaarta”.
“Marka aad kahor timaado koox awooda in natiijada ciyaarta ay dhinaca kale u badasho, iyo daruufihii aan lasoo kulanay, waxay muujineysaa in Rayo Vallecano ay leedahay tayo weerar ee aad u wanaagsan, waxay u dagaalameen isla markaana u ciyaareen si xoogan”.
“Goolkii ugu horeeyay ay dhaliyeen wuxuu ku yimid kadib markii aan luminay xakameyta kubada, kalsooni buuxda ayay heleen, waxayna u ciyaareen si fiican, waxaan ku bilaabanay ciyaarta qaab, balse waxaana ku dhameesanay qaab kale ee ka duwan”.
Dhinaca kale Ernesto Valverde ayaa waxaa wax laga weydiiyay in qaab ciyaareedka Luis Suarez uu wanaagsan yahay marka uu kooxda ka maqan yahay Lionel Messi wuxuuna yiri:
“Uma maleynayo inay sidaas tahay, dhamaanteen si fiican ayaan u ciyaareynaa marka uu Messi qeyb ka noqdo kulanka Inter Milan ee tartanka Champions League, balse waan arki doonaa sida ay xaaladiisa noqoto”.
HORDHAC: Chelsea v Crystal Palace